Jabulela ngenxenye yezindiza ye-Freeware (3)
Umbuzo Jabulela ngenxenye yezindiza ye-Freeware (3)
Ngiyabonga wathola: 17
unyaka 1 8 edlule #945 by DRCW
Zijabulise ngezindiza ye-Freeware (ingxenye 3)
Nansi lokugcina okuthunyelwe kwalesi sihloko (godu sicela ufunde ingxenye 1 ne-2)
Ngakho senze i-KLM 737 ibe njengendiza ye-payware kodwa kukhona ezinye izinto esingayenza. Uma ulandele ingxenye ye-1 &
I-2, bese ulande i-717-200 kuwebhusayithi yeRioooo.com. Ngalokhu kufaka, uvele wengezela i-FDSFX pop-
up okuvumela ukuthi ube nabasebenzi ebhodini nge-switches kwiphaneli. Yiqiniso uma usebenzisa i-FS-Passenger
khona-ke kungase kubonakale kukhululekile kodwa kungase kube izikhathi lapho ufuna ukuhamba ngaphandle kwe-FSP.
Ake sithi usebenzise i-FSP njalo futhi ungaboni isidingo sokusebenzisa i-FDSFX pop-up, Ungahle uhlele futhi ushintshe umsindo ngamunye
ushintsho ngabanye kumafayela womculo noma kunoma iyiphi enye ifomethi ye-MP3. Uma i-717-200 ifakiwe, ukufaka okuzenzakalelayo kufakwe okuyinhloko
audiophile in FSXifolda yomsindo eyinhloko. Lapho usuvula ifolda yomsindo oyinhloko uzobona ifayela elibhalwe ukuthi "FDSFX". Nakhu
lapho amafayela we-mp3 alalelwayo agcinwa:
17_Buqala u-Descent_Capt uMarcus
20_Taxi kuya ku-Gate_Ann
21_Gate Arrival_Capt uMarcus
Akudingeki ukusho uma ususebenzise le phaneli ikhwalithi yomsindo akuyona into enhle. Ungahlanza amafayela azenzakalelayo nge I-MixPad
I-Multitrack Recording Software ikhululekile futhi itholakala kulayini ku: www.nch.com.au/mixpad/
Chofoza "landa inguqulo yamahhala lapha" ingxenye.
Thatha ifayili oyifisa ukuyihlanza Isibonelo: (18_Onokufinyelela ku-Approach_Ann) bese uyikopisha bese uyinamathisela ku-Mixpad. Chofoza kwimiphumela
Icon bese usebenzisa i-Equalizer (Ebonakalayo) ngenkathi udlala i-audiophile. Lungisa izilungiselelo lapho uthola khona umsindo ongcono futhi uchofoze
isicelo. Zama ukuthuthukisa nokusika i-freq. ukuze uthole umsindo ozwakalayo.Uma uthola ukuthi i-rumble injini igxile ukuzama ukusika i-freq
phakathi kwe-100 ne-250hz. Uma ama-Highs aphikisayo zama ukunciphisa i-freq nge-5 kuya ku-7 khz bese ukhulisa ama-freqs aphakathi. Uma
ivolumu iphansi kakhulu ungayithuthukisa ngokuchofoza i-I-Amplify Icon bese ukwandisa ivolumu kuze kufike ku-400%. Uma uchofoze ngokuchofoza
Ekhaya bese ulithumela kwifolda yakho yokulanda kumafasitela. Phuma ngaphandle kwe-MixPad. Uzobuzwa uma ufuna ukusindisa "
khetha cha "
Vula ifolda yakho yokulanda futhi kuyoba nefayela eliqanjwe ngokuthi "I-Default Project" Leli fayela olihlelile. Hudulela kuwe
ideskithophu bese uyiqamba kabusha (18_On Approach_Ann). Manje ungakopisha bese uwunamathisela kufolda yomsindo we-FDSFX futhi nini
kuphakanyisiwe ukhethe Kopisha bese ubeka esikhundleni. Manje ususe esikhundleni sefayili yekhwalithi yekhwalithi ye-audio encane yokuqala ngokuthuthukiswa kwakho okusha
Ungathatha wonke amafayela ashiwo ngenhla nganoma iyiphi i-MP3 oyifisayo. Ake uthi ufuna ukufaka esikhundleni (01_Gate Ambience) nge
ifayela lomculo kulabhulali yakho ye-MP3. Ungamane uhudule ikhophi yale fayela yomculo kudeskithophu yakho bese uyiqamba kabusha (01_Gate
I-Ambience) bese ukopisha futhi unamathisele ku-FD eyinhlokoFSX ifolda yomsindo bese ukhetha ikhophi bese ushintsha uma utshelwa.
Qaphela: Ukulanda kwe-MixPad kuhlanganisa uhlelo lokuguqula ifayela yamahhala okuthiwa i-NCH Suite. Ngalolu hlelo ungakwazi ukuguqula
I-MP3 ibe imisindo ye-Wave eyenza kube khona ukuhlela nokushintsha noma iyiphi ifayela elizwakalayo .
Kulungile manje sizofaka a i-pushback kanye nejubane lamatekisi ku-KLM 737. Lolu hlelo luyi-freeware eyaziwa ngokuthi
Groundhandling5 . Yiya kulewebhusayithi: flyawaysimulation.com/downloads/f...ing-gauges-
Uma ilandwe ngaphambi kokuthi uyikhiphe idala ifayela kufolda yakho yamadokhumenti bese uyibiza ngokuthi "Groundhandling5" bese uyihudulela
ideskithophu yakho. Khipha wonke amafayela kusuka ekulandeleni kwakho kufolda ye-Groundhandling5 oyidalile. Manje vula ukhiye wakho FSX
ifolda ke Kopisha bese unamathisela "i-Groundhandling5" kokukhiye wakho FSX ifolda yomsindo. Uzokwenza lokhu kuphela kanye.
Manje vula ifayela le-KLM 737 kusuka ku- FSX ifolda yezindiza / ifolda yezindiza. Thola izindiza ifolda yephaneli bese ukopisha bese unamathisele
I-RCB_Groundhandling5 IKhabhinethi Ifayela kwiFolda ye-Panel ye-KLM 737 (Lezi yizilinganiso ze-Groundhandling5)
Kopisha bese unamathisela i-RCB_Goundhandling5_Sound.dll kuFolda Panel ye-KLM 737 (leli fayela liyatshela FSX ukusebenzisa umsindo
kusuka kufolda yomsindo oyinhloko)
Okokugcina uvule ifayela le-README futhi uzothola ingxenye elandelayo:
ebonakalayo = 0
background_color = i-16,16,16
gauge01 = RCB_Groundhandling5! PushbackStates, i-0,0
gauge02 = RCB_Groundhandling5! Okukhokhisiwe, 79,2,64,61
// gauge03 = RCB_Groundhandling! Sebenzisa iToebrakePedals, 0,0
gauge04 = RCB_Groundhandling5! Ama-Brake, i-146,2,56,61
Vula ifayela le-KLM Panel.cfg futhi isigaba esiphezulu kufanele sibonakale kanje:
iwindi00 = Iphaneli Elikhulu
window01 = Izinguquko
I-Window02 = GPS
I-Window03 = Iphaneli elikhukhumezayo
I-Window04 = Iphaneli Eliphezulu
I-Window05 = I-FlightDeck iphaneli le-SFX
I-Window06 = Ukulawula Isango
I-Window07 = I-Trim Panel
I-Window08 = PFD
I-Window09 = i-MFD
I-Window10 = i-EICAS
I-Window11 = Iphaneli Elincane
I-Window12 = Ukuvinjelwa okulinganayo
I-Window13 = GPWS / IAS / AS / FUEL
I-Window14 = Iwashi
I-Window15 = I-Wind Rage
I-Window16 = I-HSI yokulondoloza
I-Window17 = I-Altimeter yokulondoloza
I-Window18 = Isimo sengqondo sokulondoloza
iwindi19 = ama-Flaps amakhulu
I-Window20 = GPWS
I-Window21 = I-Radio Stack
Ngakwesokudla ngaphansi kweWowow21 = uhlobo lwe-Radio Stack ku I-Window22 = I-Groundhandling5
Manje pheqela phansi uze uthole:
isikhundla = 8
i-gauge04 = i-737-400! i-Transponder, i-0, i-271,159, i-68
gauge06 = 737-400! Umsindo, i-0, i-409,159, i-32
Ngakwesokudla ngaphansi kwalesi sigaba lapho uzokopisha futhi unamathisele khona:
Shintsha i- ** kuya ku-22 ngakho ifunde [Window22] [/ b]
//gauge03 = RCB_Groundhandling! Sebenzisa iToebrakePedals, 0,0
Susa i-// ekuqaleni kwe-line !!!
Ukuyihlola: Qala FSX futhi lapho usalayishiwe ku-KLM 737, cindezela ukhiye wakho we-alt (ibha yemenyu kufanele ivele phezulu
isikrini) khetha ukubuka / Iphaneli Yensimbi / bese uqhafaza ku-Groundhandling5. Qiniseka ukuthi iyasebenza bese ivala FSX.
Ngezinguquko esizenza kuze kube manje ungase wazi ukuthi akukho umsindo lapho ukhetha Fasten Seatbelt & No Smoking
Lokhu kungcono ukulungisa futhi ngikushiye okokugcina ngoba ngifuna ukuthi uqonde izinkinga ze-audiophile kuqala. Manje ukuthi sasihlanganise
leyondawo ikuvumela ukuthi ikulungise. Okokuqala une indiza FSX iqoqo elizenzakalelayo elinesihlalo sokusebenza esingenamshini futhi akukho ukushintshwa okubhemayo
ngamathoni ezinsimbi ngakho-ke sizodinga ukuvula elinye lala mafolda endiza. Nakulokhu futhi FSX ifolda eyinhloko / izinqola /
izindiza. Thola ifolda ye-Airbus_A321 bese uyivula.
Vula ifolda yomsindo bese uthola ifayela elimakwe "umsindo" bese ulivula.
Skrolela phansi futhi ukopishe & unamathisele lesi sigaba ku-notepad yakho:
Izingxenye eziphambili ziyakhombisa FSX kokushintshwa ngakunye okuhilelekile.
Ingxenye engezansi (igama lefayela = iCabinAlert) iyatshela FSX ukudonsa umsindo kusuka kokuphambili FSX ifolda yomsindo.
Manje vula ifolda yomsindo we-KLM futhi kuzophinde kube nefayela elimakwe "umsindo". Vula ifayela lomsindo bese ukopisha & unamathisele lokhu
izingxenye ezingezansi ohlwini. Gcina njalo isikhala phakathi kwezigaba.
Kufanele manje ube nezwi lebhele uma usebenzisa lezi zitshintshi.
Ngithemba ukuthi ufunde okuningi lapha. Uma usuqhuba lezi zindlela uzothola endaweni lapho ulayisha i-freeware
indiza bese uyikhipha kudeskithophu yakho, kuzoba yimvelo yesibili ukwenza lokhu kulungiswa ngaphambi kokuyifaka FSX. Uzokwazi
ukutshela okwenziwe nje ngokubuka ifayela le-airgroup cfg nefolda yefenisha ukuze ungasho ifolda yomsindo. Sasihlanganisa le nkinga
Ekuthunyelwe okuzayo ngizokufundisa indlela yokufaka i-cockpit ye-2D ibe yizindiza ezingabandakanyi. Indlela yokwengeza i-GPS / i-Autopilot /
Umsakazo / namanye amawindi aphumayo ezindizeni ezingenayo, bese-ke indlela yokufaka i-cockpit yangempela okuncane
Isikhathi ukudala page: 0.155 imizuzwana